अनसनको तयारीमा डा. गोविन्द केसी, यस्ता छन् माग – सजल सन्देश
अनसनको तयारीमा डा. गोविन्द केसी, यस्ता छन् माग
By Sajal sandesh	 Oct 30, 2019
काठमाडौं – सरकारलाई छबुँदे मागसहित भाइटीकासम्मको अल्टिमेटम दिएका डा. गोविन्द केसीले सत्रौं अनसन कात्तिक १८ गते सोमबारदेखि सुरु गर्ने भएका छन् ।
टेनिस खेल्दाखेल्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा घाइते